MY SOMALI CULTURE: Maxaa ku dhacay Riwaayadahii?
Beryahan danbe waxaad moodaa mudo laga joogo ugu yaraan 15 sano in ka badan inay soo baxeen riwaayado tiro yar oo aan badneyni, halkoodiina bedeleen filimda casriga ah ee afsoomaaliga lagu matelo, kuwaas oo majaajiladu ku yartahay. filimadaas oo runtii ah horumar u soo kordhay bulshada soomaaliyeed oo aad u fiican kana turjuma badanaa dhibaatada xaqiiqada iyo xaalada guud ee bulshada Soomaliyeed meelkasta oo ay aduunka joogaan. Filimadaasi waxa qora dhalinyaro kala duwan oo ku dadaala inay gudbiyaan fariimaha laka duwan ee ah xaga dhaqanka, diinteena suuban iyo dhibaatooyinka qurbo jooga. Inkastoo ay aad ugu faro yareysteen oo qaarkood (action) ama firfircooni gaar ah u sameeyaan si ay u soo jiitaan dhalinyarada run ahaantii malaha filimadani dhadhankii suugaaneed ee ku saleysnaa sirbeebta, iyo majaajilooyinkii soo jiidashada lahaa.
Hadaba iyadoo tirada abwaanada iyo aftahanku sii kordhayaan, ayna jiraan websiteyo lagu keydiyo gabayada sida Halabuur, aftahan iwm, aadna u horumareen curinta Gabayada iyo heesahu, waxa xusid mudan inay qabyo tahay wali kaalintii sameynta Riwaayaduhu, waxa xusid mudan in ayaanay imika jirin wax wada shaqeyn midho dhal leh oo la taaban karo xaga abwaanada dhexdooda ah marka la eego xaga kaalintaasi oo ka dhaxaysa iyaga dhexdooda, ha ku sugnaadaan dalka gudahiisa iyo dibadiisabee!
Run ahaantiina wuxuu lumay xidhidhkaasi kadib markii ay dhacdayd dawladii Soomaliya oo aad u horumarisay kuna mideysey Hoyga Fanka iyo Suugaanta ee Soomaliyeed dhamaan, abwaaniinta, fanaaniinta, farsamo yaqaanada muusiga iyo isku dubaridayaasha fanka, iyagoo dhamaantood lahaayeen darajooyin, guno, mushaharooyin, aqalo, ictiraaf iyo wada shaqeyn, ahaana shaqaale dowladeed oo meel uga soo wada jeeday ilaalinta dhaqanka.
Iyadoo nidaamkaasi burburay dalkii Soomaliya la odhan jirayna haatan wali ku jiro xaalad adag, Jamhuuriyada Soomalilandna tahay curad, leedahayna Wasaarada Hidaha iyo Dhaqanka ma jirto wax maalgelin iyo gacan ay ka geysatay dhaqanka oo buurani, waxay imika noqotay ninkastowba kaligaa, hase yeeshee taasi oo jirta wali howshii halkii bay ka socotaa, aftahankii wali wax wuu curiyaa, fanaankii wali wuu heesaa, farsamayo yaqanadii musigu wali way sameeyaan musiga, hadaba anoo wali quus ka taagneyn inuu isbedel horumarlihi dhaco, waxaan jecleystay inaan is weydiino Meeyee riwaayadihii? Maxaa sababay wada shaqeyn la'aantan? maxaa meel uun taagay Fanaan heesaya?
Waxay jira in abwaanadu heesahoodii u dhibaan fanaanada magac mooyee maalna kasoo galin waxqabadkooda, fanaaniintuna raadsadaan cid laxanka iyo musiga u saarta heesaha haday la baxaan kharashka iyo hadii kaleba, halkaana kaligood kaga faa'iideystaan sameynta bandhig faneedyada iyo xafladha. halkay hadii iskaashi dhici lahaa riwaayado caqiibo leh oo layska kaashaday loo soo bandhigilahaa bulshada Soomaliyeed dhaqankana lagu horumarinlahaa, cidkastoo wax ku darsateyna ay ka heli lahayd magac iyo maalba!
Ugu danbeyntii abwaanada waxaan odhan lahaa aniga oo cabiraya aragtideyda, dalka dibadiisana ku nool, iskaashiga soo celiya cidi idiinma maqna'e; runtiina howshu mid yar maaha, murtidiinana lagama dheregsana waxase hubaal ah in aad looga heli lahaa wax badana shacbigu sugaayey Riwaayado murtii iyo madadalo leh ee howsha gala!
by Milgo 07/20/10
Posted by Milgo at 12:56 PM
Labels: Maxaa ku dhacay Riwaayadahii (Maqaal)